रमाइलो चलचित्र बनाएको छु - कुराकानी - साप्ताहिक
 विशाल भण्डारी, निर्देशक
म्युजिक भिडियोबाट चलचित्रको निर्देशक बन्नुभएको छ, कत्तिको एक्साइडेट हुनुहुन्छ ?
एक्साइटमेन्टको लेभल एकदम हाई छ, साथसाथै केही नभर्स पनि छु । सपना थियो फिल्म मेकर बन्ने, पूरा हुँदैछ । मेरो काम मनैले राम्रोसँग सम्पन्न गरेको छु । अब बाँकी कुरा दर्शकको हातमा छ ।
कोहलपुर एक्सप्रेस एउटा हिन्दी चलचित्रबाट प्रभावित भएको गाइँगुइँ चल्दै छ नि ?
लौन, मेरो चलचित्र प्रदर्शन नै नभै कसले हेरेछ ? यस्तो हल्ला गर्ने व्यक्तिको खोजी गरेर उसका विरुद्ध पाइरेसीको मुद्दा हाल्नुपर्छ ।
चलचित्र प्रदर्शन हुनुअघि नै प्रभावित भएको कुरा दर्शकलाई जानकारी गराउनुपर्ने होइन र ?
प्रभावित भएको अथवा नभएको भन्ने कुरा सिनेमा हलमा नआउँदा सम्म थाहा हुँदैन । मेरो चलचित्रलाई सिनेमा हलमा आउन दिनुहोस्, दूधको दूध पानीको पानी भैहाल्छ । फेरि हामी नेपाली साह्रै फुर्सदिला छौं । फलानाको चलचित्र फलानासँग मिल्यो भन्दै कुरा गरेर समय वर्वाद
गरिरहेका छौं ।
कोहलपुर एक्सप्रेसबाट कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
कसैले पनि नराम्रो चलचित्र बनाउँछु भनेर काम गर्दैन । मैले पनि रमाइलो चलचित्र बनाउने प्रयास गरेको छु ।
दर्शकले तपाईंको चलचित्र किन हेर्ने ?
सबै दु:ख बिर्सेर १ घण्टा ५५ मिनेट मजाले हाँस्नका लागि ।
कोहलपुर एक्सप्रेसमा त्यस्तो खास के छ ?
त्यस्तो खास त केही पनि छैन जसले चलचित्र निर्माणको परिभाषालाई नै परिवर्तन गरोस् अथवा समाज र देशको विकासमा कुनै योगदान पुर्‍याओस् । यद्यपि यसले दर्शकलाई हँसाउने निश्चित छ । अलि पृथक्चाहिँ के छ भने यसमा अभिनेत्रीहरू मुख्य भूमिकामा छन् ।
तीन जना स्थापित अभिनेत्रीलाई एकसाथ अभिनय गराउन कत्तिको गाह्रो भयो ?
खासै गाह्रो भएन । सबै मेरा साथी नै भएकाले अनि म्युजिक भिडियोमा धेरै अघिदेखि सँगै काम गरेकाले पनि सहज भयो ।
म्युजिक भिडियो बनाउन गाह्रो कि चलचित्र बनाउन ?
हरेक काम आफैंमा गाह्रो हुन्छ । दुनियाँमा कुनै काम पनि सजिलो छैन । यद्यपि गाह्रो कामलाई सजिलो तरिकाले गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।